Apple waxay waydiisaneysaa horumariyeyaasha inay ku wareejiyaan Safari kordhinta biraawsarka laftiisa | Waxaan ka socdaa mac
Maanta, waxaan ku dhejin karnaa kordhinta Safari, bogga soo-saaraha ama Mac App Store. Apple waxay dooneysaa horumariyayaashu inay uga baxaan kordhinta gudaha dukaanka barnaamijka. Tani waxay u oggolaaneysaa koontaroolid iyo nabadgelyo dheeri Apple, oo gacanta ku haysa waxa kordhin kastaa sameyneyso.
Ilaa iyo inta isticmaaleyaashu ka walwalsan yihiin, mustaqbalka waxaan awoodi doonnaa oo kaliya inaan aadno kordhinta Safari ee kordhinta codsiyada Safari. Shaqadani waxay u muuqatay markii ugu horreysay OS X El Capitan, tan iyo markaas, kordhinta waxaa loo qaybiyaa Mac App Store laftiisa, kiisas badan, laakiin ma ahan dhammaantood.
Xilligan la joogo labada ikhtiyaarba waa la heli karaa. Laga bilaabo Diseembar, waxay awoodi doonaan oo kaliya inay u diraan kordhinta Codsiyada Safari. Kordhinta ay horumariyayaashu ka qaybiyaan degelladooda waxay noqon doontaa mid aan is waafaqikarin laga bilaabo taariikhdaas.
Tani macnaheedu maaha kordhinta aan horey u soo dejisanay inay shaqeeyso. Xaqiiqdii, macOS Mojave ayaa aqbali doona labada qaab, maadaama ay arki doonto iftiinka marka labada fursadoodba wali la heli karo. Xaqiiqdii, macOS 10.15 ayaa caadi ka dhigi doonta ficiladan, oo aan dib dambe loo heli doonin 12 bilood.
ka faa'iidooyinka in aan ku helno qiyaastaan ​​waa kuwan soo socda:
Dhinac, lala xiriirinayo codsiyada, rakibistu way fududahay, iswaafajinta waa la jaangooyay (Waxaan xasuustaa qaar ka mid ah cusbooneysiinta 1Password ee dhibaatooyinka bixisay)
Sidoo kale, rakibaadda ayaa ka ammaan badan ka socota Mac App Store.
Bedelkii, kordhin qaar ka mid ah kuwa yaryar ama kuwa madax-bannaan oo madax-bannaan ayaa joogsanaya inay jiraan, maadaama aysan magdhow siin karin codsiyada ku yaal dukaanka Apple. Kuwa kale macquul maahan. Tusaale des Auto Refresh, oo u baahan doona inuu ku xirnaado codsi Mac ah, markay maanta ahayn. Ugu dambeyntii, xaalado badan, codsiyada maahan inay noqdaan kuwo iswaafaqsan marka loo eego luqadda lagu abuuray, luqadda hadda ee arjiga.
Waxaan arki doonnaa toddobaadyada soo socda, waa maxay falcelinta horumariyayaashu kahor cabirkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay waydiisaneysaa horumariyeyaasha inay u wareejiyaan Safari kordhinta biraawsarka laftiisa
Apple wuxuu sii wadaa inuu sharad ku sameeyo isboortiga wuxuuna siiyaa fasalo jimicsi horumariyayaasha